U-Anja Schaap angabona izithombe 'kuPhenyo oluceliwe' ngakho-ke akukho PsyOp? : UMartin Vrijland
U-Anja Schaap angabona izithombe 'kuPhenyo oluceliwe' ngakho-ke akukho PsyOp?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-19 Juni 2019	• 7 Amazwana
Uma izithombe zophenyo ezicelwe ebusuku ebusuku zibukeka, ungasheshe uthathe isiphetho sokuthi ngeke siphinde sibhekane nomunye u-PsyOp olahlekile (ukusebenza kwengqondo). Ngaphakathi isihloko sami mayelana ne-Anja Schaap elahlekile Ngabonisa kanjani RTL News baletha uhlelo lokusebenza lukaSherlock Holmes 'oluhlangene' nokulahlekelwa nokuthi u-Anja Schaap wayenezinto ezinhle kakhulu ngoSherlock Holmes ekhasini lakhe le-Facebook. Ngisho nekheli lekhaya elikhuluma ekhasini lakhe le-Facebook yilokho uSherlock Holmes (I-221B Baker Street).
Abaningi babhekisele ekuqondeni kwe-PsyOp ukuze basuse lolu hlelo lokusebenza lokusesha phakathi kwabantu. Ngiphinde ngichaze ukuthi kungani abantu befuna sifune ndawonye. Lokhu kuhlangene nhlobo lokuthi ayikho izinhloli ezingcono kunabantu abaqala ukubuka abanye abantu njengomdlalo we-Pokémon omnandi. Ngaphezu kwalokho, amaphoyisa angakwazi ukuwamukela ngokusemthethweni wonke lawo mafoni isikhathi esigcwele emva kokuvuma amalungelo okusebenzisa ikhamera, imakrofoni, idatha yendawo, njll.
Emifanekisweni engezansi kwe-Opsporing Verzocht sibona u-Anja Schaap ehamba ngokucacile ehamba enqabeni, ehlezi ebhasini futhi ehamba ngeKatwijk. "Ngakho-ke ukhona ngempela futhi uye wadlula ngempela ngeKatwijk ngakho ukulahleka kungokoqobo", Khona-ke mhlawumbe isiphetho sakho sizoba. Ngabe ngikukhumbuza futhi ukuthi i-Algemeen Nederlands Persbureau isesandleni somkhiqizi we-TV: uJohn de Mol. Lokhu kusho ukuthi izindaba zingenziwa ndawonye ngemikhiqizo ye-TV (amasu e-Hollywood). With isofthiwe yanamuhla, ungakwazi kalula ukudala ubuso engekho. Ungakopisha umuntu wonke futhi uvumele umlingisi wokuma ngaphakathi noma umlingisi uhambe umzila futhi wabeka umzimba nombuso wezinhlamvu ezidaliwe phezu kwalo. (Funda ngaphezulu ngezansi kwevidiyo, uma ividiyo isusiwe, chofoza lapha)
Noma ubani olandele icala lika-Anne Faber futhi usanda kubona ukuthi icala likaJulie van Espen eBelgium ezindabeni kumele liqaphele ukuthi kwakukhona ukufana okukhulu kulawo maqembu amabili. Uma silandela abezindaba, lezi zindaba ziyiqiniso kuphela. Sithuthukiswa izithombe eziqinisekisa ubuqiniso futhi asibona kuphela umndeni nabangane, kodwa sibona nezithombe zangempela namavidiyo abalingiswa abakhulu, okusho ukuthi akunakwenzeka ngaphandle kweqiniso. Kule nkinga ye-Anja Schaap iphinde ibe yizithombe ezisiqinisekisa ukuthi u-Anja Schaap ukhona ngempela nokuthi angeke asakwazi ukuba yi-PsyOp.
Esihlokweni esingezansi, ngizama ukuchaza ukuthi kungani usengadingeka ukukhanda ikhanda lakho. Qala isingeniso esifushane.
Sizwile ngezehlakalo ze 'troll factory' noma 'troll army', kodwa kuphela eRussia (abezindaba basitshela). Nokho, okuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi lawo mabutho aseTroll aseNetherlands ikakhulukazi. Awusaboni lokho kahle kakhulu ekuphenduleni kwami, ngoba ngiwahlunga ngokusebenzisa isihlungi segama elizibekelayo. Ake sithi uma ohulumeni basebenza nge-PsyOp (ukusebenza kwengqondo) izikripthi bese bethengisa lezi mpumelelo 'ngaphesheya komngcele' (ngoba wazuza kahle ezweni lakubo), udinga ibutho elikhulu le-troll ukuze uthole izimpendulo kuzo zonke izinhlobo zezingqungquthela nasezingxoxweni ze-inthanethi ezenhlalo abezindaba "ukuqapha". Bangakwazi ukuqondisa ingxoxo ngokusebenzisa imibono efana nokuthi "Ngiyamazi". "Ngikhuluma nomuntu omaziyo"Noma" wayenomngani wami ehhovisi "nezinye izinkulumo eziningi.
Ngokuvamile abantu ababuki ukuthi yiliphi i-Facebook iphrofayli elandela impendulo. Akudingeki ukuthi kube njalo amaphrofayli amanga; lokho kungase kube ngabantu abakhona ngempela.
Kungenzeka ukuthi wezwe ngegama elithi Inoffizieller Mitarbeiter. Ngaphansi kweStasi ye-East German GDR, labo babengabasebenzi abathule, abafihlekile, ngokwesibonelo, abagcina amehlo komakhelwane babo. Lokhu kubikwa ukuthi kwakungomunye wamashumi amahlanu ngaleso sikhathi. Ungakholelwa ukuthi lesi senzakalo sanyamalala ebusweni bomhlaba emva kokuhlanganiswa kweMpumalanga neJalimane laseNtshonalanga. Angiqiniseki ngalokhu ngalokho. Angibukeli - ngenxa yokuhlangenwe nakho kwami ​​nazo zonke izimpendulo eminyakeni - ukuthi iNetherlands inebutho elikhulu le-troll elungele ukuqondisa izingxoxo zezokuxhumana zenhlalo ngokuphathelene neskripthi esingenzeka.
Uyazi ukuthi uJohn de Mol ungumnikazi we-ANP? Uyazi ukuthi uJohn de Mol waba kanjani ocebile? Ngokukhulu ngokudayiswa kwemiboniso ye-TV ephumelelayo. Uyazi kusukela kulezo ziboniso njenge-Holland's Got Talent. Bese behlolwe kulabo bantu abayizigidi ezimbalwa baseDashi futhi uma bebamba, badayiswa ngaphesheya komngcele njengombono futhi bathola kahle. Ngesikhathi se-Zaanse vloggersrel, ngakwazi ukubona ngeso lengqondo (ngenxa yemifanekiso ehlinzekwa ngumngane owayehlala endaweni) ukuthi i-Powned yayinzima kanjani emsebenzini ngokuqondisa i-vloggersrel esekelwe ngokuphelele. Kwacaca ukuthi kwakukhona ukuqondisa. Kwacaca ukuthi, isibonelo, ukuboshwa kuthatha isikhathi eside kakhulu, ngoba umakhamera wayedinga ukuhamba endaweni efanele. Ngokushesha ngaphambi kwalokho, izinduna ezaziphikisana phambi kwekhamera zazihleka ngokuhleka futhi zithandana. Ukuthi i-Zaanse vloggersrel yayisiteji ngokuphelele futhi iqondiswa bukhoma. Lezo zithombe ungalapha bheka futhi.
Ngivame ukuxoxisana ngamasu okwenza abalingiswa abafake kakhulu. Ngingathanda ukukuphinda lokho kubafundi abasha. I-Deepfakes yenziwa nge-software ye-GAN. Le software isofthiwe ehlakaniphile ukuthi, ngokusekelwe ezinkambisweni eziningi ze-AI kwinethiwekhi, idala izinhlamvu ngaphandle kweze. I-A is English for Intelligence Intelligence; yini emele ukuhlakanipha kwengqondo. Enye inethiwekhi ye-AI bese ihlola izithombe ezidalwa yinethiwekhi yokuqala futhi zilahla noma zibavuma. Ngokwenza lokhu kumjikelezo, abalingiswa baba yiqiniso nakancane ngesinyathelo ngasinye, ukuze ekugcineni ukwazi ukukhiqiza abantu abaqanjiwe ngokuphelele ababukeka njengabantu abavamile (ongase uhlangabezane nje emgwaqweni). Sekuyiminyaka imboni yefilimu ikwazi ukudala izinhlamvu ezingekho, umthuthukisi wamakhadi we-graphic NVIDIA uqiniseke ukuthi manje ungakwenza nalokhu kwi-PC enengqondo yemidlalo (bheka lapha). Inkampani efanayo (i-NVIDIA) iyakwazi ukudala izindawo ezingokoqobo. Bheka ividiyo engezansi bese uqhubeka ufunda.
Manje kukhona nesofthiwe emakethe ongayinikeza ingxoxo ebukhoma ngemuva kwekhamera yewebhu kwi-PC ejwayelekile bese ubeka kokubili ubuso nezwi lomunye ngakho. Lokhu kwenziwa ngesikhathi sangempela futhi ngaphandle kokuphazamiseka. Ungabona lokhu ngezansi (funda ngaphezulu ngaphansi kwevidiyo).
Uma ungeza zonke lezi zinsiza ezitholakalayo ndawonye, ​​ngakho-ke ungakwazi ukudala noma ubani oyifunayo, futhi ungakha futhi umlando wawo futhi wenze konke kubonakale sengathi kufana nokuphila. Ngokwesibonelo, ngokweqile, ungakhipha ividiyo ka-Anne Faber eminyakeni embalwa edlule, noyise wakhe emotweni, futhi wenze wonke umuntu akholelwe ukuthi lokhu kuyiqiniso. Noma ingabe mhlawumbe akuyona into yokucabanga, kodwa yilokho nje okukwenzekayo ekusebenzeni? Ungakuhlola? Singaqiniseka ukuthi ohulumeni kanye nabamemezeli abakhiqizi izindaba ezingamanga futhi singakholelwa ukuthi izinsizakalo zangasese zithuthukisa amasu ukuze zibone okujulile, kodwa akuzona nje abakhiqizi bezinhlanzi ezinjalo ngokwabo?
Ngakho uma uJohn de Mol, umgidi wezigidi, umkhiqizi omkhulu we-TV nomnikazi we-ANP (Jikelele weDutch Press Agency) kungenzeka ukuthi abe nazo zonke izindlela futhi ngakho-ke kufanele kubhekwe ukuthi uyakwazi ukwenza izinto ezijulile, ngakho-ke kufanele sihlehle lapho umuntu ekhona ubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi singakhohliswa? Ngiphinde ngibonise izikhathi eziningana (ngoba angizange ngikubonise emibonisweni isekelwe ngezinto ezibonakalayo sasikhohliswa). Kungenzeka yini ukuthi kubi kakhulu ukuthi iskripthi esinjalo, njengesiboniso esikhulu se-TV, sithengiswa phesheya, ngoba siboniswe ukuthi siphumelele?
"Yebo, kodwa i-Vrijland, kufanele kube khona umgomo wokukhohlisa abantu ngezinga elikhulu kangaka? Ubani owenza into enjalo!"Khona-ke kufanele uqaphele ukuthi yimiphi imithetho emisha eqaliswayo, kungekudala ngemva kwalesi sigameko esikhulu njenge-Anne Faber. Ezihlokweni eziningana ngachaza ukuthi kungani icala lika-Anne Faber (lapho uMichael P. engumenzi wobugebengu) cishe laliyi-PsyOp (ukusebenza kwengqondo). Ukusebenza ukuphoqa ngemithetho eminingi. Umthetho abantu abangasoze bahlangana ngaphansi kwezimo ezivamile. Kulokhu, kukhona okumele kwenzeke kakhulu.
Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo
Ake ngiqale ngokuchaza futhi ukuthi abezindaba bangadlala kanjani lo mdlalo we-PsyOp nokuthi yini Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo ukubusa okubonakala sengathi kusetshenziswa njalo.
Yisiphi leso sikhundla ngaleso sikhathi Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo? Lokho wena njengohulumeni okwenzayo yilezi: Udala inkinga yomphakathi ngomthelela omkhulu (Inkinga) kuvuselela ukusabela okungokomzwelo okukhulu kubantu (Ukusabela) futhi ingasebenzisa imithetho nemigomo emisha okungavamile ukuba yamukelwe (Isixazululo). Wena ke uphakamisa ukuthi ngamazwi afana nokuthi "Uhulumeni uhlulekile ekuvikelweni umphakathi ongawulindela kuwo", Kusanda kuvela uNgqongqoshe waseDutch uSander Dekker.
Ngakho-ke ungakwazi ukusebenza ngezindlela ezichazwe ngenhla ukuze udale inkinga enjalo. Eqinisweni, kusho ukuthi awukwazi ukuhlola noma yikuphi ukuxoxisana, inkulumo noma yisiphi isithombe kunoma yiliphi iqiniso. Futhi akuzona izithombe zamakhamera ezokuphepha, njengoba uzibona ku-TV. Noma awukholelwa ukuthi Ukutholakala Kufunwa kungasetshenziselwa imigomo ye-psyop? "Umethuli onjalo omnandi."
Ngakho awukwazi ukukholelwa ngempela amehlo akho. Ithelevishini namanye amavidyo akwazi ukuphefumulela impilo ezinhlamvu ezingekho. Ngisho noma ucabanga ukuthi lirekhodiwe ngocingo nokuthi ngabe livela kwikhamera yezokuphepha, awukwazi ukuthi liyiqiniso. Konke kungenzeka futhi akukho okungenakwenzeka emhlabeni wezindaba. Kumele uqaphele ukuthi yikuphi Isixazululo ilandela ngemuva nje komcimbi omkhulu kangaka.
Icala le-Anja Schaap liphinde libukeka lidingeke lihlonywe ezindaweni eziphakeme. Esikhathini esidlule, isigamu seNetherlands sagijima i-smartphone esandleni sabo ukuzingela izibalo ze-Pokémon ku-reality game engathandwa yiyo amaphuzu. Inhloso yukuthi lo mkhankaso wezemidlalo wokulandelela abanye abantu uguqula abantu ebuthweni elihle lomthengisi. Yisandla kubo bonke abasha abaphunyukayo abafuna ukuphunyuka umbuso wokunakekela osemusha noma owusizo kubo bonke labo abaphikisayo abangase babe yingozi. I-Stasi e-East Germany yayisengumfana omncane kulokho esikubonayo ekwakhiwa eNetherlands. Kwakukhona omunye ku-fifty Inoffizieller Mitarbeiter. Ngokuqinisekiswa kwemidlalo kokusesha, wonke umuntu uzoba yisihloli ngokushesha.
U-Anja Schaap ulahlekile kakade kuvezwe i-PsyOp? Bona lapha ukuthi kungani (ividiyo)
I-Thijs H. PsyOp kwakudingeka ihlukumeze ukufihla kwezobuchwepheshe futhi eseyitholile kakade namuhla
Amathegi: I-221B Baker Street, i-adres, Anja, uhlelo lokusebenza, izithombe, afakiwe, Holmes, I-Katwijk, ukutholwa, Izimvu, Sherlock, kuceliwe
19 Juni 2019 ku-11: 42
Kulabo abangakwazi ukubona ukuxhuma, bheka nje uDe Mol athola udumo. Imiqondo emibili (ukuhlolwa kwezenhlalakahle) ivela kuBig Brother no-Utopia kubonisa lapho abantu basebenzela khona .. umphakathi olawulwa yizinombolo, lapho abaphikisanayo bebanjwe khona kanye namahora we-24 wokubheka isimo noma kungabizwa ngokuthi 'udidekile' umuntu ', wagcina umuntu omsulwa ngaphansi kwethonya lama-opiates. Siyakwamukela eMadurodam esikhathini esizayo esiseduze
19 Juni 2019 ku-12: 34
Katwijkers noKatwijkerinnen othandekayo, zibuze ukuthi ngabe ukuhlaziywa ngenhla kungalungile. Hamba uphinde ufune u-Anja, kodwa qhubeka ubuka lokho kuhlaziywa ngenhla nawe, ngakho-ke ubone ukuthi bonke labo okuthiwa ngamalungu omndeni akhona nalabo abantombazane kanye nomakhelwane, hlola lokho.
Kuze kube manje awuzange uzwe kusuka kumuntu ohlala phansi okuthiwa uhlezi eduze no-Anja eGrand Cafe de Blauwen Bock (bheka ividiyo Ucwaningo oluceliwe). Siphinde sibone umakhelwane we-A Schaap 1 izikhathi futhi sibonile ukuthi lo makhelwane uvele eshaqwe ngezithombe ngezindlela ezijulile ..
Abafowethu nodadewabo base-Anja, kufanele kube nezinhlanu, usuvele uzibonele.
Baphi bonke labo okuthiwa bangabangane baka-Anja?
I-Katwijkers ngabantu abathembekile kakhulu, kodwa abakwazi ukukhohliswa, ngakho-ke hhayi manje.
Imibuzo eminingi ivulekile kithi ukuthi ithawula izimpendulo. Icala lishaya ubuthi bakho obukhulu kakhulu
Okunye okungaqondakali: Ngezansi kweLeidsch Dagblad, ukuphendula kweZero ???, ekugcineni emva kwamasonto e-3 amaKatjjkers athola elinye isithombe se-Anja !!!?
Othandekayo uKatjjkers noKatwijkerinnen bafunda lokhu futhi (ngoba mhlawumbe sikhohliswa)
19 Juni 2019 ku-14: 16
Lokho okubhalwa nguMartin kulungile. Ngeshwa, abantu abavamile abakwazi ukukubona noma kangcono abafuni ukukubona ngoba nabo ngokwabo benza isifiso. Akukho okungokoqobo. "ubungane" buyiqiniso futhi buyiqiniso. Wonke umuntu ubamba iqhaza ezingeni elincane, i-Facebook, njll. Empeleni, 'thina' akumele silindele noma yini kusuka kubantu abavamile. Bahle kakhulu, baneholo elihle / elifanele elihlobene ne-IQ yabo ephansi nemisebenzi elula. Phela, abantu bahlala esimweni somkweletu okufanele sisebenze kahle ngendlela ethile. Umcebo wabantu unesixhumanisi esiqondile nobumpofu obunokweleta ezweni. Ukushushumbisa abesifazane, ubufebe, izithombe zobulili ezingcolile ezinganeni, ukudayisa izidakamizwa, ukukhishwa kwemali, ukwakhiwa kwezilwandle, izivumelwano zentela, njll. Konke kungenzeka lapha. kahle, iMadurodam ingenye yamazwe aphezulu abafana abavela kulo mqulu. Ukhona umuntu owake wazibuza ukuthi kungani amanye amazwe engakahlakaniphile ngokunikeza izintela zentela futhi enikeza izinzuzo ezinkampanini njll njengoba uMadurodam enza? Isizathu ukuthi amanye amazwe awavunyelwe ukwenza lokho ngamadoda avela kwiskripthi. Amazwe awazimele futhi alawulwa, aqondiswe abafana besikripthi. Abantu bacabanga ukuthi kuhle futhi badlala umdlalo. Kukhona isivumelwano esivumelwaneni phakathi kwabahambeli abahlukumezayo 'abahlali', abafana besikripthi, nabantu abavamile. Uma nje ungahambi kakhulu, umphakathi ovamile uzoba kahle. Inani labantu liguquguquka kakhulu 'ezimisweni' zalo nokubukwa. Abantu abavamile abanalo lokhu ngaphandle kokuthi kubekwe uhulumeni. Zonke izinceku ezesabekayo, ezikhohlisayo, ezigqilazayo ngaphandle kokungena. Zum kotzen.
19 Juni 2019 ku-18: 15
Ukungaboni kahle, lapho umhlambi unemvume ngaphansi kwezimo ezinzima ukuze udle emadlelweni ngezikhathi ezimisiwe, ngaphansi kokuqondiswa okunzima okungukuthi. Kuncike ekutheni i-remittance pro rata yezindleko isedlulele ngaphezu kwephuzu lesimanje ukuthi i-BS [N] iveza futhi inenzuzo. Njengoba isikhathi sithuthuka futhi ukukhiqiza kwehla, i-BS [N] ihlukumezekile kodwa iphumelele futhi isikhathi sokuphila sincishiswe kakhulu ngokusebenzisa izinsimbi ezitholakalayo kumshayeli wesigqila ukuze izindleko zingapheli izinzuzo. Siyakwamukela eMadurodam, lapho ama-dikes anikezwa khona, ama-hedges ahlunywe futhi amasimu agcinwe kuze kube manje. Ekuboneni kokuqala kubonakala kuzinzile futhi kuhlambalaza, kodwa kukhona okhohlisayo.
19 Juni 2019 ku-18: 44
Lo Mnu. Schaap ngombono wami akulona uhlamvu oluthile lwekhompiyutha, kodwa nje umlingisi (mhlawumbe ukhokhelwa kahle).
Ngandlela-thile, angifuni ukusho ukuthi uhlamvu olujulile alukwazanga ukuba khona, ngicabanga ukuthi kulula ukuthola umlingisi we-crazy ekhanda ngokwanele ukwenza into enjalo ngemali evulekile.
Futhi ngandlela-thile imifanekiso ehambayo yalezi zimvu ibonakala ingenzele kimi, kodwa ngingahle ngiphuthe.
19 Juni 2019 ku-20: 20
Kodwa noma kunjalo kuphephile kakhulu ukunikeza ubuso obusha kumdlali wesimanje (bona imizuzu yokugcina kuvidiyo ye-NVIDIA ukuthola ukuthi kulula kanjani)
19 Juni 2019 ku-23: 03
Ngenhlanhla, amabutho e-troll (amabutho angama-moderatpr) angafakwa esikhundleni se-AI, ngoba awela ngaphansi kwezihlahla:
« Uma iziprofetho zigcwaliseka, yilokho bufakazi bokuthi izinkolelo zakho ziyiqiniso?
U-Anja Schaap utholakale efile olwandle ngomkhumbi waseJalimane? Ingabe lokho kungenzeka ngokusho kwemithetho yemvelo? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 16.767.560
Ingabe iTurkey izothatha iSyria futhi kusho ukuthini lokho ngobudlelwano ne-US, Russia ne-Iran?
Incwadi evela ku-2016 I-Eyes of Darkness kaDean Koontz ikhuluma nge-bioweapon ye-Wuhan-400 virus
Kungani sifakaza ikhophi yendalo yonke enempilo yeminyaka engama-7000
SalmonInClick op Isikhathi sokusebenza!
SandinG op Isikhathi sokusebenza!
Ukushona kwelanga op Ukuqeda kanjani ukugxekwa kwenqubomgomo yezwe? Spin a "Rypke Sail Maker" Indaba
UWilfred Bakker op Kungani indalo yonke iyikhaya lakho langempela